Weeraro diyaaradeed oo xalay ka dhacay gobolka Gedo. – The Voice of Northeastern Kenya
Weeraro diyaaradeed oo xalay ka dhacay gobolka Gedo.
Wararka ka imaanaya koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in Diyaaradaha qumaatiga u kaca ay xalay duqeymo ka geysteen degaan lagu magacaabo Dhiigtaar oo ka tirsan gobolka Gedo, sidaasna waxaa sheegay saraakiil Soomaali ah.
Dadka degaanka ayaa warbahinta gudaha u sheegay inay arkeen diyaarado Gantaalo ku tuuraya goobo la rumaysan yahay inay isku abaabulayeen xoogag ka tirsan ururka Al Shabaab.
Wali lama xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay Duqeynta xalay ka dhacday gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya masuuliyiinta gobolkaas ayaana sheegay inay weli socdaan uruurinta xogta iyo macluumaadka la xiriira Duqeymahaasi.
Saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubbaland waxay warbaahinta gudaha Soomaaliya u sheegeen inay jirto Duqeyntaasi, waxayna tilmaameen qorshahaan inuu qeyb ka yahay howl galo dagaal kordhin ah oo lagula jiro ururka Al Shabaab.
Ciidamada AMISOM ee u sugan dalka Soomaaliya ayaa inta ugu badan waxay duqaymo ka fuliyaan gobolada Koonfurta halkaas oo la rumaysan yahay inay tahay meesha ay ugu xoogan yihiin dagaalameyaasha Al-shabaab ee dowlada Soomaaliya iyo Ciidamada Midowga Africa ee caawinaya diidan.
← Guddiga IEBC oo billaabaya diiwaangelinta codbixiyayaasha Kenyaanka ah
DHAGEYSO Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay garoon ay Al-shabaab horay u xireen. →